SEENAAMOO GARAAF JIRAATAMAA? – Beekan Guluma Erena
SEENAAMOO GARAAF JIRAATAMAA?	Beekan Guluma Erena
General Category, Seenaa April 13, 2016QEEQA SIYAASAA	1 Comment
SEENAAMOO GARAAF JIRAATAMAA?
== = = = = = == = = = = === = = = =
Namni qochumaa isaa guuttachuu qofaaf jiraatu bineensa, bineensallee saree!!. Akkuma beekkamu ilmi namaa gosa bineensotaa tahullee wanni bineensaan adda godhu sammuu yaaddu, xinxaltuufi waa baayyee hubachuu dandeessu qabaachuu isaati. Sammuu tanatti fayyadamee waan baayyee kalaqee, mala adda addaa baasee itti fayyadamuun qabsoo jireenyaa injifachuuf tattaafata. Ilmi namaa garaa qofa guuttachuuf gonkuma hin jiraatu. Kan garaa qofa guuttachuuf jiraatu bineensa, bineensallee bineensa salphataa. Bineensi salphataan garaaf jecha namatti madaqee jiraatu immoo saree dha. Sareen bineensi fakkaataan isii bosona keessa kan jiraatan yoo tahu isiin immoo garaa isii qofa guuttattee jiraachuuf namatti madaqxee jiraatti. Yoo warri isii guddifate waan isii sooran dhaban ganda biraatti galti. Yoo gandi isiin itti galte san garaa isii kan quubsan tahe qe’uma san duraa dutti. “Sareen qe’ee itti quuftee dutti” kan jedhamuufiis kanuma.
Gootummaan injifachuu qofa osoo hin taane, onnee hadhooytuu qabsoof dhukaatu, miira hamilee gaariin nama onnachiisuufi murannoo qabaatanii biyya ifii balaa diinaa irraa wardiyaa dhaabbachuuf if qopheessuu irraa jalqaba. Diinni ibidda fedhe qabatee deemuus sodaattee biyya tee itti lakkisuu diddaaf harka qullaa kaatee du’uun gootummaadha. Hantuunninuu waraanamtu eeboo ofirratti ciniinaa duuti. Abboottiin teenya kaleessa gootummaa dhabaaf miti kan Oromiyaa irree alagaa jalaa baasuu dadhabaniif. Osoo gootummaa qabnuu gamtaa, tokkummaa dhabuu isaanii qofaaf diinni addaan faffacaasee biyya harkaa nyaate. Kanaaf nuti dhaloonni arraa onneefi gootummaa abboottiin keenya qabaachaa turan irratti tokkummaa dabalannee qabsoo teenya itti fufuun injifannoo gaarii akka nu gonfachiisu shakkii hin qabu. Qabsoo teenya finiinsinee galtee mana keenya keessa humnaan jiraattu, wayyaanee firraa baasuuf dura saree madaqxuu akka nuti manichatti hin kalooyne duttu, OPDO ajjeessuu irratti xiyyeeffachuu gaarii dha. “Harka duwwaa qabsooynuus gootummaa kaleessa qabnu irratti tokkummaa keenya dabalannaan injifannoon keenya dhihoo dha.” Ammaaf yaada koo goolabe, hanga xumuraatti na faana turuu keessaniif guddaa galatoomaa,
Email:- ak23873@gmail.com or saphalookedir@gmail.com
Lakk. Mobile: +254707482480
← TAAJJABBII (Waliin Dubbii Nama Sadii)-Caalaa Haa hiluu Abaataa’tiin
DUSHOOFI SUUTEE:Monenus Hundarraa Galataa →
One thought on “SEENAAMOO GARAAF JIRAATAMAA?”	Sanyii kumsaaApril 14, 2016 at 8:05 amPermalink	Kun wanuma jirudha kuno anaf miltoowwan koo badi tokkoo malee wku irra guttumaagutatti nu ar’achisani galle hojii malee tenna! kanuma mitiree of biddeen of guddifataan kan ormaa irra ta’uun!!